Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada / WOWOW Dheriga Kaydiyaha Dheecaanka Dusha Kaydka Chrome
Laalaabista, qasabada dheriga buuxinta ee la fidsan karo: Tuubada dheri buuxinta waxay leedahay tilmaamo laba laab ah, cudud lulid iyo 2 gacan, dalool keli ah, qasabada weelka jikada ganacsiga waa la laalaabi karaa marka aan la isticmaalin, si hufan u karinta iyo badbaadinta booska
Dhamaystirka chrome: tuubada jikada ee gidaarka leh ee quruxda badan ee chrome, aan nabaadguurin iyo mid aan miridhsanayn, oog sare oo dhalaalaysa, masax kaliya ayaa nadiifin kara
Dheriga adag ee dheriga dheriga ah: cufnaanta sare ee naxaasta adag iyada oo loo marayo farsamo shaandhayn gaar ah oo bilaa rasaas ah, heerka biyaha waa la dammaanad qaaday
Neoperl aerator: waxa uu bixiyaa cadaadis joogto ah iyo socodka biyaha oo toosan, ABS aerator cadaadis sarreeya oo leh qulqulo yar, faleeb la'aan ah
Dammaanad, taageerada macaamiisha: 5-sano damaanad qaadka iyo taageerada macaamiisha ee waqtiga ku habboon ayaa la bixiyaa. Waxay daboolaysaa soo celinta xaddidan ee 90-maalmood. Fadlan nagala soo xidhiidh dalabkaaga. Fiiro gaar ah: Fadlan dami gacanta tuubada gidaarka agteeda marka aan la isticmaalin si loo kordhiyo nolosha dheriga buuxinta!
Dheriga Chrome dheriga tuubada ah 2311200C
Markaad naqshadayneyso jikadaada cusub, waa wax weyn inaad kaqaban karto gabi ahaan gunta. Waxaad ka fikiri kartaa dhamaan howlaha aad jeceshahay oo aad ugu baahan tahay inaad ka dhigto khibrada jikadaaga midka ugu fiican. Jikada waxaa loogu talagalay qoysaska badankood halka ugu badan ee aad waqtigaaga ku qaadato marka aad guriga joogtid. Marka si fiican ayaad u naqshadeeysaa jikada riyada ee buuxisa dhammaan baahiyahaaga iyo rabitaankaaga, ee adiga iyo qoyskaagaba. Sida aad jikada uga naqshadeysid xoqida, waxa ugu weyni waa inaad runtii wax uun sameyn kartid. Ma jiraan wax xadidan oo jira. Hagaag, miisaaniyad caqli macquul ah. Waqtiyada badankood waxaad naqshadeeysaa jikadaada riyada oo keliya, waxayna kuxirantahay qiimaha iyo miisaaniyaddaada dhabta ah, waxaad bilaabeysaa inaad isku hagaajiso waxyaabaha aad sameyso
waxay ku habboon tahay miisaaniyaddaada. Su’aasha ayaa ah sidee looga dhigi karaa mid ku habboon miisaaniyadaada. Ma dooneysid inaad hoos udhigto waxyaabaha adiga kuugu muhiimsan. Marka laga hadlayo alaabada iyo dhammeynta jikadaada, waxaa jiri kara kala duwanaansho aad u weyn marka loo eego qiimaha. Markaad fiiriso farqiga u dhexeeya qaababka kale lafteeda, mararka qaarkood si dhib yar looma dareemin. Sidan ayaad u badbaadin kartaa qarashka si caqli gal ah. Dhanka kale waa inaadan ka tanaasulin tayada qalabkaaga jikada ee muhiimka ah. Markaas raqiis ayaa u muuqan kara inuu qaali noqon doono dhamaadka. Taasi waa iyo waa laga fogaan karaa waqti kasta. Kaliya waa inaad heshaa alaab-qeybiye kugu gaarsiin kara qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta. WOWOW waa iibiyahaas!
Tuubada chrome dheriga waxqabadka ee shaqeynaya
Dheriga buuxinta dheriga ayaa runtii ah shaqo ka shaqeysa jikadaada oo noloshaada jikada ka dhigi karta mid aad u fudud. Maaddaama aysan dad badani lahayn qalabka jikada noocan ah, isticmaalku wali ma baahna. Si kastaba ha noqotee, waxay ku siinaysaa faa iido weyn jikadaada waxayna kaa fogeysaa inaad ku qaadatid waxyaabo culus sida dheriyo biyo ka buuxdo. Adigoo ku riixaya tuubada chrome-ka ee WOWOW waad ku buuxin kartaa dheriyadaada biyo markii ay horeyba u joogeen foornada. Qaabkan uma baahnid inaad dheryahaan u qaadatid jikada jikada ama foornada inaad biyo ku karsato. Gaar ahaan markaad haysato gacmo ama gacmo daciif ah, ama si fudud aad u liidato, tuubada weelka duuban ee chrome-ka ayaa noloshaada ka dhigi kara mid aad u fudud.
Adigoo riixaya tuubada chrome-ka waxaad ku buuxin kartaa dheriyo biyo ah inta ay ku jiraan foornada jikada. Waxba kuma jabna haddii dabku mar horeba sii socdo, ama haddii ay jiraan dheryo dheriyo dheriyo ah oo karkaraya iyo karinta. Maaddaama qasnadda dhalada chrom-ka laga sameeyay ay ka sameysan tahay bir tayo sare leh, waxay si fudud u adkeysan kartaa kuleylka. Sidaa darteed tuubada dheriga ee chrom-gu waa mid aad u shaqeynaya oo wax weyn ku soo kordhinaya jikadaada.
Qiimaha tuubada dheriga chrome
Sida kor ku xusan, WOWOW waxay ku siineysaa qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta aad ku heli karto suuqa. Dheriga cajiibka ah ee chrome dheriga cajiibka ah ayaa runtii la tartami kara A-brand kasta maadaama ay bixiso tayo la mid ah ama xitaa ka sii fiican, hadana waxaa lagu bixiyaa qiimo jaban. Qiimaha tuubooyinka dheriga-chrome-ka ah ee A-brand-ka ayaa noqon kara seddex laab ama ka sii qaalisan. WOWOW waxay marar badan muujineysaa in qiimaha noocaan oo kale aan loo baahnayn gabi ahaanba. Sidaa daraadeed WOWOW waxay ku siineysaa qiimaha ugu fiican ee lacagta lagu rito tuubada chrome dheriga. Shaki kuma jiro gabi ahaanba!
Tayada biyaha tuubada karsan ee WOWOW waa mid aan la arki karin. Maaha meesha ugu dambeysa maxaa yeelay WOWOW waxay isticmaashaa agab tayo sare leh sida bir daxalan iyo dhameystir chrome oo tayo sare leh. Waxaad isla markiiba aragtaa tayada. Miisaan yar oo aan ka yarayn 60 oz waxaad dareemaysaa inuu ka samaysan yahay bir adag. Dhalada cufan ee chrom-ka ayaa dib u soo noolaaneysa sanado badan, waxaad sidoo kale ka faa iidaysan kartaa waxqabadka sii socda ee bilaa macnaha ah ee tuubada dheriga chrom-ka. Tuubada dheriga ee chrom-ga waxaa sidoo kale ku qalabeysan qalabka korantada Neoperl. Tani waxay bixisaa cadaadis joogto ah, iyo biyo joogto ah. Soo-saareha ayaa dammaanad qaadaya biyo-baxa oo yar, iyo biyo-dhibic la'aan ah iyo biyo-soo-daadanaya.
Ku gaadho tuubada dheriga chrome
Tuubada dheriga ee chrom-ka ayaa si xikmad leh loogu tala galay in aysan ka qaadin wax boos ah oo muhiim ah jikadaada. Adigoo isku laabanaya mashiinka mashiinka lagu kariyo ee fidsan ee mashiinka lagu ridi karo, waxaad si fudud ugu keydin kartaa derbiga gadaashiisa foornada. Tuubada dheriga ee chrom-ka ayaa leh laba dhinac oo wareegsan oo wareegsan. Sidan ayaa lagu kaydin karaa waxyar, laakiin wali waxay leedahay meel dheer marka gabi ahaanba la kala bixiyo. Iyada oo ballackeedu yahay ugu badnaan 24 inji ah xagga derbiga, waxaad runtii ku gaadhi kartaa gees walba oo jikadaada jikada ah.
Labada gacan-qabsi waad ku hawlgali kartaan dheriga chrom-ka si fudud u buuxinaya adigoon waxba daadin. Tani waxay sidoo kale bixisaa xasillooni dheeraad ah, maadaama dadka qaar ay ka baqayaan qasnadaha noocan ah. Maaddaama aysan jirin weelka biyaha lagu shubo, biyaha daadanaya waxay kufiirin karaan foornada. Waad kuxiran kartaa tuubada dheriga chrom-ka mashiinka mashiinka, oo darbiga agtiisa ah. Waadna ku xiri kartaa sidoo kale tuubada wejiga tuubbada ku shaqeysa. Waxay dammaanad ka qaadaysaa durdur joogto ah oo sida xaqiiqada ah u shaqeeya ujeedkiisa. Difaaca laba-geesoodka ah wuxuu siinayaa amniga ugu badan. Markaad rabto inaad isticmaasho tuubada dheriga chrom-ka, kaliya waad furi kartaa tuubada weelka, waxaadna ku shaqeysaa matoorkan chrome dheriga sida tuubada kale ee jikada.
Dheecaan ka samaysan chrome diiran
Sababta oo ah dhammeystirka chrome-ga qurxoon, tuubada makiinada duuban ee chrome waxay siineysaa wax aad u wanaagsan oo ah qaabka jikadaada. Tani waxay ka kooban tahay daaha dhalaalaya oo dhalaalaya oo dhalaalaya tuubbada dheriga ku buuxisa. Marka lagu daro jirka jirka ah ee jirka ah ee 304 steel, tuubada dhalada chrome-ka ah ee mashiinka wax lagu kariyo waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa qaabka jikadaada. Ka sokow, tuubada dheriga ee chrome-ku waa mid aan xirneyn wuxuuna sii ahaanayaa qurux iyo qurux sanado. Maahan wax bilaash ah WOWOW waxay ku siinaysaa muddo 5 sano ah oo dammaanad ah tuubada dheriga chrome. Tani waxay cadeyneysaa in WOWOW uu ku kalsoon yahay wax soo saarkiisa, iyo qiimaha lacagta aad ku helayso. Faa'iidooyinka ay leedahay dheriga chrom dheriga oo si tartiib tartiib ah:
• Tuubada dheriga ah ee la buuxinayo
• Naqshad casri ah oo leh tayo chrome oo tayo sare leh
• Labada weel
• Gaarista ugu badan oo leh labada wareeg ee wareejinta
SKU: 2311200C Categories: Qubeyska jikada, Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada Tags: Dhamaadka Chrome, Jikada jikada ee jikada, Mount Mount
Laab / 2 Gacan / Gacanta Swing
Ganacsiga / Makhaayada / Hoyga / Gudaha / Jikada